Izindaba - Ukuphrinta amakhadibhodi egolide nesiliva
Ukuphrinta amakhadibhodi egolide nesiliva
Ikhadibhodi legolide nesiliva liwuhlobo olukhethekile lwephepha.
Ihlukaniswe yaba izinhlobo ezimbili: amakhadibhodi egolide elikhanyayo kanye nekhadibhodi legolide eliyisimungulu, amakhadibhodi esiliva akhanyayo kanye nekhadibhodi yesiliva eyisimungulu;inokukhanya okuphezulu kakhulu, imibala ekhanyayo, izendlalelo ezigcwele, futhi i-surface beam inomphumela wephepha le-laser.Ibhokisi lokupakisha elenziwe ngalo linezici zokungangeni kwamanzi, ukumelana nokugqwala nokumelana nokugqoka.
Ikhadibhodi legolide, amakhadibhodi esiliva, ne-aluminium foil amaphepha angamuncwa.Zenziwa ngokunamathisela ucwecwe lwe-aluminium phezu kwekhadibhodi.Imvelo engamuncwanga ye-aluminium foil ithinta ngqo uhlobo olomile lwesendlalelo sikayinki.
Izinyathelo zokuphepha zedizayini yekhadibhodi yegolide nesiliva:
Ingaphezulu lekhadibhodi legolide nesiliva linokukhanya okuphezulu nokubonakala okuqinile.Lapho uklama isakhiwo ngokuhambisana nezici zezinto ezibonakalayo, naka ukugqamisa ukucwebezela kwensimbi okuyingqayizivele kwegolide nesiliva amakhadibhodi kanye nephepha le-laser elingakwazi ukuvezwa ngemibala ebukekayo, futhi uveze ngokufanelekile umbala wensimbi ongaphezulu ukuze uveze ubuhle bobuciko bendawo. ukupakisha.
Ngenxa yokukhanya okuphezulu kwendawo yekhadibhodi yegolide nesiliva, inani elincane lokuphrinta ngokweqile kulula ukubonwa ngeso lenyama.Ngakho-ke, kuyadingeka ukugwema ukuphrinta okuhle phakathi kwezakhiwo ezinemibala eminingi ngangokunokwenzeka.Ukuze uthole izakhiwo eziphrinte kakhulu ngokwedlulele, cabanga ukunweba amamajini amakhasi abhalwe ngaphezulu anombala okhanyayo cishe ngo-0.2mm ukuze ugweme ubumhlophe obusobala ngenxa yamaphutha wokuphrinta ngokweqile.
Lapho uhlela amakhadibhodi egolide nesiliva anemigqa eqinile, imigqa, umbhalo, nezithombe, gwema ukusebenzisa imigqa engalungile egqamile futhi ecashile engalungile, ukuze ungamane ubonise ukunamathisela futhi uthinte ikhwalithi yokuphrinta yomkhiqizo.Umbhalo ongcono kakhulu, imigqa, imingcele, namalogo kufanele kuphrintwe ngokweqile kumbala ongemuva futhi kuhlelwe ukuthi kube mnyama ukuze kugqame.
Izinyathelo zokuqapha zokuphrinta amakhadi ephepha egolide nesiliva:
1 Uyinki wokuphrinta.
Ngokuvamile sisebenzisa uyinki we-UV ukuze siphrinte.Oyinki be-UV basetshenziswa kakhulu kuma-substrates amuncayo asuselwa ephepheni.Banobubanzi obubanzi bokuphrinta bokuhlinzeka ngamanzi kanye nokuphepha emshinini, okunikeza indaba ephrintiwe ukuguquguquka okungcono nokucaca okuphezulu.Ifaneleka kakhulu ukuphrinta kumakhadibhodi wegolide we-laser nesiliva.
2 Thatha izinyathelo zokulwa nokunamathela.
Imvelo yephepha le-aluminium foil yekhadi legolide nesiliva inquma isici sokuthi ungqimba lukayinki alukwazi ukoma ngokushesha.Esinye isici sephepha le-aluminium foil legolide nesiliva lekhadibhodi ukuthi linobushelelezi obuphezulu nokungenwa kahle.Indaba ephrintiwe ijwayele kakhulu ukunamathela ngemuva kokuphrinta.Uma lokhu sekwenzekile, ungqimba lukayinki olushelelayo noshelelayo luzohlukaniswa ngokushesha noma lungapheleli lapho lunyatheliswa, okuzothinta kakhulu umphumela wokubukwayo womkhiqizo, noma kube umkhiqizo olahlwayo.
3 Izinga lokushisa lendawo yokuphrinta.
Izinga lokushisa elifanele le-ambient lingaphezu kuka-25°C.Ukuphrinta ngaphansi kwezimo zokushisa ezinjalo kuvumela ukomisa ungqimba lukayinki futhi kulula kakhulu ukusebenza.Uma izinga lokushisa lemvelo (elifana nobusika) alikwazi ukuhlangabezana nezidingo ezithile, izindawo zokushisa ezidingekayo zingasetshenziswa.
Isikhathi sokuthumela: Apr-14-2021